48 Nke a bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha, bụ́ Chineke Izrel, kwuru+ banyere Moab:+ “Ahụhụ ga-adịrị Nibo,+ n’ihi na e bukọrọwo ihe o nwere! E menyewo Kiriateyim+ ihere, e wegharawo ya. E menyewo ebe dị elu e wusiri ike ihere, e mewokwa ka oké ụjọ jide ya.+ 2 A kwụsịwo inye Moab otuto.+ A nọrọwo na Heshbọn+ chepụta ọdachi ga-adakwasị ya, sị: ‘Bịanụ ka anyị laa ya n’iyi ka ọ ghara ịbụkwa mba.’+ “Gị onwe gị kwa, Madmen, mechie ọnụ. Mma agha na-eso gị n’azụ. 3 Mkpu ákwá na-ada na Họroneyim,+ a na-ebukọrọ ihe dị n’ime ya, na-ebibikwa ya oké mbibi. 4 E bibiwo Moab.+ Ụmụntakịrị na-eti mkpu ákwá n’ime ya. 5 N’ihi na mmadụ kwaara ákwá na-agbago ụzọ e si aga Luhit,+ ee, a na-ebe ákwá. N’ihi na mmadụ kwaara ákwá mwute si na Họroneyim na-agbada n’ihi mbibi+ ndị mmadụ nụrụ. 6 “Gbaanụ ọsọ; meerenụ mkpụrụ obi unu ụzọ mgbapụ,+ unu ga-adịkwa ka osisi junipa dị n’ala ịkpa.+ 7 Ebe ọ bụ na ị tụkwasịrị ọrụ gị na akụ̀ gị obi, a ga-eweghara gị.+ A ga-adọrọkwa Kimọsh+ na ndị nchụàjà ya na ndị isi ya n’agha+ n’otu mgbe.+ 8 Onye na-ebukọrọ ihe mmadụ ga-abata n’obodo gị niile,+ ọ dịghị obodo ga-alanahụ.+ Ndagwurugwu ga-ala n’iyi, a ga-alakwa ala dị larịị n’iyi, ọ bụ ihe Jehova kwuru. 9 “Meerenụ Moab ihe e ji ahụwa ụzọ ama, n’ihi na ọ ga-apụ wee ghọọ mkpọmkpọ ebe;+ obodo ya dị iche iche ga-aghọ naanị ihe ijuanya, n’enweghị onye bi ha.+ 10 “Ka onye na-ejighị ozi ọ na-ejere Jehova kpọrọ ihe bụrụ onye a bụrụ ọnụ;+ ka onye na-egbochi mma agha ya ịwụfu ọbara bụrụkwa onye a bụrụ ọnụ! 11 Ndị Moab tụsaara ahụ́ kemgbe ha bụ ụmụaka,+ ha nọ jụụ dị ka ikè mmanya.+ E sitụbeghị n’otu ite wụnye ha n’ite ọzọ, a dọrọtụbeghị ha n’agha. Ọ bụ ya mere ha ka ji nwee ụtọ ha, ísìsì ha agbanwebeghịkwa. 12 “‘Ya mere, lee! oge na-abịa,’ ka Jehova kwuru, ‘mgbe m ga-ezigara ha ndị na-awụfu ihe dị n’ite, ha ga-awụfu ha;+ ha ga-awụfu ihe niile dị n’ite ha. Ha ga-akụrikwa ite ukwu ha niile. 13 Ihere Kimọsh+ ga-eme ndị Moab, dị nnọọ ka ihere Betel, bụ́ obi ike ụlọ Izrel, na-eme Izrel.+ 14 Olee ihe mere unu ji sị: “Anyị bụ ndị dike+ na ndị ume juru n’obi ibu agha”?’ 15 “E bukọrọwo ihe Moab, e busowo obodo ya dị iche iche agha.+ E gbuwo ụmụ okorobịa ha a họrọ ahọ,’+ ka Eze, onye aha ya bụ Jehova nke ụsụụ ndị agha, kwuru.+ 16 “Ọdachi nke ga-adakwasị ndị Moab dị nso, ọdachi nke ga-adakwasị ha jikwa oké ọsọ na-abịa.+ 17 Ndị niile gbara ha gburugburu ga-emetara ha ebere, ọbụna ndị niile maara aha ha.+ Sịnụ, ‘Lee nnọọ ka e si gbajie mkpanaka siri ike, bụ́ mkpara mara mma!’+ 18 “Si n’ọnọdụ gị dị ebube rịtuo, nọdụ ala ka akpịrị kpọọ gị nkụ, gị ada+ bụ́ Daịbọn,+ bụ́ nwaanyị bi n’ime ya; n’ihi na onye bukọọrọ ihe dị na Moab abịawo ịwakpo gị. Ọ ga-ala ebe gị niile e wusiri ike n’iyi.+ 19 “Guzoro, lewe anya ka ị hụ ihe na-eme n’ụzọ, gị nwaanyị bi n’Aroa.+ Jụọ nwoke na-agba ọsọ na nwaanyị na-agbapụ agbapụ ajụjụ. Sị ha, ‘Gịnị mere?’+ 20 E menyewo Moab ihere, n’ihi na e menyewo ya oké ụjọ.+ Kwaa ákwá, tie mkpu ákwá. Kọọnụ n’Anọn+ na e bukọrọwo ihe Moab. 21 Ikpe erutewo n’ala dị larịị,+ ya bụ, Holọn na Jehaz+ na Mefat,+ 22 na Daịbọn+ na Nibo+ na Bet-diblateyim, 23 na Kiriateyim+ na Bet-gemọl na Bet-mion+ 24 na Kiriọt+ na Bọzra+ na obodo niile dị n’ala Moab, ma ndị dị anya ma ndị dị nso. 25 “‘E gbujiwo mpi Moab,+ a gbajiwokwa ogwe aka ya,’+ ka Jehova kwuru. 26 Meenụ ka ọ ṅụbiga mmanya ókè,+ n’ihi na o buliwo onwe ya elu megide Jehova;+ Moab atụrụwo onwe ya n’agbọ ọ gbọrọ,+ ọ ghọwokwa ihe a na-akwa emo, ee, ya onwe ya. 27 “‘Ọ̀ bụ na Izrel aghọghị ihe ị na-akwa emo?+ Ka à hụrụ ya n’etiti ndị ohi?+ N’ihi na ị na-efufe isi mgbe ọ bụla ị na-ekwu okwu megide ya. 28 “‘Hapụnụ obodo gaa biri na nkume dị elu,+ unu ndị bi na Moab, dịrịkwanụ ka nduru nke na-akpa akwụ́ n’ọnụ olulu.’”+ 29 “Anyị anụwo banyere nganga Moab+—ọ dị mpako nke ukwuu—banyere mbuli ọ na-ebuli onwe ya elu na nganga ya na mpako ya na obi ya nke dị elu.”+ 30 “‘Mụ onwe m maara oké iwe ọ na-ewe,’ ka Jehova kwuru, ‘ma ọ gaghị adị otú ahụ; ha agaghị emezu+ ọnụ ahụ ha turu.+ 31 Ọ bụ ya mere m ga-eji tiere Moab mkpu ákwá; m ga-akwakwara Moab dum ákwá.+ A ga-akwara ndị Kia-hires+ ákwá. 32 M ga-akwara gị ákwá karịrị nke a kwaara Jeza,+ gị osisi vaịn Sibma.+ Alaka gị ndị na-awasa nke ọma awasawo gafee oké osimiri. Ha awasawo ruo n’oké osimiri, ruo Jeza.+ Onye na-ebukọrọ ihe mmadụ awakpowo mkpụrụ mịịrị gị n’oge okpomọkụ,+ wakpokwa mkpụrụ vaịn ị ghọtara.+ 33 E wepụwo obi ụtọ na ọṅụ n’ubi mkpụrụ osisi nakwa n’ala Moab.+ Emewokwa m ka mmanya ghara ịdị n’ebe nzọchapụta mmanya.+ O nweghị onye ga-eji iti mkpu ọṅụ na-azọcha mkpụrụ. Mkpu a ga na-eti agaghị abụ mkpu ọṅụ.’”+ 34 “‘Ha etiwo mkpu ákwá na Heshbọn,+ e wee nụ ya n’Iliele,+ ọbụna na Jehaz.+ Ha etiwo mkpu ákwá+ na Zoa,+ e wee nụ ya na Họroneyim,+ ọbụna n’Eglat-shelaịshiya;+ n’ihi na ọbụna mmiri Nimrim+ ga-atọgbọrọ n’efu. 35 M ga-eme ka a ghara inwekwa onye na-eweta onyinye n’ebe dị elu nakwa onye na-esurere chi ya ihe nsure ọkụ na Moab,’+ ka Jehova kwuru. 36 ‘Ọ bụ ya mere obi m ga-eji na-eme mkpọtụ dị ka ọjà n’ihi Moab;+ obi m ga na-adakwa ka ọjà n’ihi ndị Kia-hires.+ Ọ bụ ya mere ihe hiri nne o mepụtara ga-eji laa n’iyi.+ 37 N’ihi na isi niile akwọchaala,+ a kpụkwara ajị agba niile akpụ.+ Aka niile bu ọnyá,+ e kekwara ákwà iru uju n’úkwù!’”+ 38 “‘A nọ n’elu ụlọ niile dị na Moab nakwa n’ámá ya niile na-eti mkpu ákwá;+ n’ihi na akụwaala m Moab dị nnọọ ka ite na-abaghị uru,’+ ka Jehova kwuru. 39 ‘Lee nnọọ ka ụjọ si jide ya! Tienụ mkpu ákwá! Lee nnọọ ka Moab si gbaa ọsọ! Ihere emewela ya.+ Moab aghọwo ihe a na-akwa emo na ihe na-emenye ndị niile gbara ya gburugburu ụjọ.’” 40 “N’ihi na nke a bụ ihe Jehova kwuru, ‘Lee! Dị nnọọ ka ugo si efekwasị n’ihe ọ ga-eburu,+ otu onye ga-agbasa nku ya iburu Moab.+ 41 A ga-eweghara obodo ya niile, wegharakwa ebe ndị siri ike dị n’ime ya. N’ụbọchị ahụ, obi ndị dike nke Moab ga-adị ka obi nwaanyị ime na-eme.’”+ 42 “‘A ga-ekpochapụkwa Moab ka ọ ghara ịbụkwa mba,+ n’ihi na o buliri onwe ya elu megide Jehova.+ 43 Ụjọ na olulu na ọnyà na-echere gị, gị onye bi na Moab,’+ ka Jehova kwuru. 44 ‘Onye ọ bụla nke na-agba ọsọ n’ihi ụjọ ga-adaba n’olulu; onye ọ bụla nke sikwa n’olulu ahụ na-arịgota, ọnyà ga-ama ya.’+ “‘N’ihi na m ga-eme ka afọ a ga-elebara Moab anya bịakwasị ya,’+ ka Jehova kwuru. 45 ‘Ndị na-agba ọsọ eguzorowo na ndò Heshbọn n’enweghị ike ọ bụla. N’ihi na ọkụ ga-esi na Heshbọn rere pụta,+ ire ọkụ ga-esikwa n’etiti Saịhọn pụta;+ ọ ga-erepịa agba ntị abụọ nke Moab, repịakwa opu isi nke ụmụ aghara.’+ 46 “‘Moab, ahụhụ ga-adịrị gị!+ Ndị Kimọsh+ alawo n’iyi. N’ihi na a kpụrụwo ụmụ gị ndị ikom na ụmụ gị ndị inyom dị ka ndị a dọtara n’agha. 47 N’oge ikpeazụ, m ga-akpọkọta ndị e si na Moab dọrọ n’agha,’+ ka Jehova kwuru. ‘N’ebe a ka ikpe e kpere Moab jedebere.’”+